Cristiano Ronaldo oo ka careysiiyay macalinka kooxda Manchester United José Mourinho – Gool FM
(Manchester) 25 Luulyo 2018. Wargeyka “The Sun” ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in ku biirista Cristiano Ronaldo ee kooxda Juventus ay ka dhigay xidigo badan ee ku sugan Bianconeri inay iska diidaan inay ku biiraan kooxo kale.
Difaaca reer Brazil ee Alex Sandro ayaa lag soo waramayaa inuu door biday inuu sii joogo kooxda reer Talyaani ee Juventus, inkastoo saxiixiisa ay wada xiiseenayaa kooxaha waaweyn ee qaarada yurub.
In Alex Sandro uu badalo go’aankiisa ayaa sabab u ah kadib imaatinka Cristiano Ronaldo ee kooxda Juventus.
Laacibka reer Brazil ayaa yimid kooxda Bianconeri saddex sano kahor, wuxuuna kaga soo biiray naadiga dalka Portugal ee Porto, wuxuuna si aad ah ugu dhawaaday inuu u dhaqaaqo kooxda Chelsea. Laakiin wuxuu markan doonayaa inuu ka garab ciyaaro xili ciyaareedka soo aadan Cristiano.
Go’aanka Alex Sandro ayaa waxay ka cereysiisay tababaraha kooxda Manchester United Jose Mourinho inuu lasoo saxiixdo, si uu ugu xoojisto difaaciisa garabka bidix.
RASMI: Goolkii ugu quruxda badnaa tartanka Koobka Adduunka 2018 oo la shaaciyey…(Yaa ku guuleystay?) + DAAWO